Has Mnangagwa Threatened to Arrest Opposition Leader Chamisa? - allAfrica.com
President Emmerson Mnangagwa has said that if opposition presidential candidate Nelson Chamisa chooses chaos, the law would prevail. Mnangagwa's comments come in the wake of several threats by Chamisa to unleash an "earthquake" to block the forthcoming polls if his demands for a "free, fair and credible" elections were not met.
The Herald, 25 July 2018
The law will be applied firmly on elements bent on inciting anarchy in this year's harmonised elections as authorities are committed to delivering a peaceful and credible poll,… Read more »
New Zimbabwe, 25 July 2018
"If anyone causes anarchy, the rule of law will prevail. We will not allow chaos in our country," president Emmerson Mnangagwa told a campaign rally in Mhondoro on Tuesday. Read more »
Vice President Constantino Chiwenga has warned MDC-Alliance leader Mr Nelson Chamisa against causing anarchy in the country, saying he should desist from student activism type of… Read more »
New Zimbabwe, 18 July 2018
MDC Alliance presidential candidate, Nelson Chamisa has fired a broadside at the Zimbabwe Electoral Commission (ZEC) chair Priscilla Chigumba describing her as "arrogant" for… Read more »